हात्माकथा-२: छुसी - पेटबोली ...!
Home » आफ्नै कथा • व्यङ्ग साहित्य » हात्माकथा-२: छुसी
मैले अलि कठोर आवाजमा भनेँ, ‘सरकार, यो गलत हुन्छ। आवेशमा नआइबक्स्योस्। यो कदम राजदरबारको लागि महँगो पर्छ। यो १७ साल होइन, जनता धेरै बुझ्ने भइसके। राजतन्त्र संकटमा पार्ने काम नगरिबक्स्योस्।’
मैतिदेवीको प्रहरी विट बाहिर म आधा होश र आधा बेहोशीको अवस्थामा थिएँ। मैले आफूलाई सम्हाल्ने कोशिस गर्दै आँखा खोल्ने प्रयास गरेँ। वरिपरी अँध्यारै अँध्यारो थियो। केही देख्दै देखिनँ। आफूलाई नियाल्ने प्रयास गरेँ। सर्ट त लगाएको थिएँ तर बटन खुल्लै थिए। सर्ट आफैले गरेको बोमिटले हिल्लै थियो। अझ तल नियालेँ, एउटा खुट्टामा मोजा मात्र थियो।
मैले आफूलाई उठाउने प्रयास गरेँ, तर सकिनँ, शरीर नै थरर काँम्प्यो। प्रहरी बिटतिर हेरेँ। खाली थियो। एकमनले सोचेँ, राम्रै भयो। कम्तीमा कसैले देखेन। संकटकालको बेला थियो। १० दिन पनि बितेको थिएन, त्यही बिटमा एकरात १२ बजे रक्सीले टिल्ल भएर साथीलाई रातोपुल पुर्‍याउन जाँदा त्यहाँका असईले ‘सर, हजुर यहीँबाट फर्किबक्स्योस्, अर्को सरलाई म पुर्‍याइदिन्छु, यसरी राति हिँड्नु खतरा छ’ भनेर मलाई घट्टेकुलो कोठासम्म पुर्‍याउन एकजना जवान खटाएका थिए।
पुरानो घटना याद आउनेबित्तिकै मलाई रुन मन लाग्यो। ती बिचरा असईले आज मलाई यो अवस्थामा देखे के भन्लान्? मन भतभती पोल्न थाल्यो। म उठेर प्रहरी बिटतिर नगइ सिधै घट्टेकुलो जानेतिर अगाडि बढेँ। ठ्याक्कै पारीपट्टि घरपटीको कपडा पसल थियो। समय बिहानै थियो। पसल खुलेको थिएन। म लड्खडाउँदै बाटोसम्म पार गरेँ र पारी पुगेर थचक्कै बसेँ। मेरा खुट्टा चलिरहेका थिएनन्। मेरो टाउको उठिरहेको थिएन। आँखाको माथिल्लो भाग पट्ट फुट्लाजस्तो गरेर दुखेको थियो। म थचक्कै बाटोको छेउमा बसेँ।
विराटगरबाट प्लस टु पास गरेपछि बिए पढ्न फेरि काठमाडौं आइपुगेँ। काठमाडौं आइपुगेको भोलिपल्टैबाट एउटा महिला साप्ताहिक पत्रिकामा जागिर खान थालेँ। यो पत्रिकामा जागीर खाँदाको अनुभवको बारे कुनैदिन छुट्टै पुस्तक लेख्नुपर्ला 😉 केसम्म भनौं भनेँ, यो पत्रिकामा म हरेक दिन बेलुका जागीर छोडेर हिँड्थेँ तर भोलिपल्ट नयाँ जागीर खान फेरि त्यहीँ पुग्थेँ। अनि कलेजमा जागीर छोडेको र जागीर पाएको पार्टी हरेक दिन हुन्थ्यो मेरोतर्फबाट। ****
म दरबारबाट ६:३० तिर निस्केको थिएँ। केही फोनकल गरेपछि म भट्टी खोज्न दौडेँ। मेरो मनमा छटपटी बढिरहेको थियो। राजाले चाल्ने कदमले निम्त्याउने भयावह स्थितिको कल्पनाले नै मेरो आङ जिरिङ्ग गर्थ्यो। मैले काम गर्ने पत्रिका राजनीतिक पत्रिका पनि थिएन अनि यो दैनिक पनि थिएन। त्यसैले मलाई यो ठूलो समाचार लेख्नुपर्ने कुनै वाध्यता पनि थिएन। अनि मलाई यो समाचार अर्कोलाई दिएर त्यसको व्यापार बढाउने सोख पनि थिएन। सबैभन्दा आनन्द त रक्सीसँगै यसलाई घुट्क्याउनुमा थियो। म चाबेल पुगेँ, एउटा भट्टीमा छिरेँ, एकप्लेट सुकुटीसँग एउटा रोयल स्गेग मागेँ र देशको बारेमा सोच्दै पिउन थालेँ। मातेर लट्ठ परेपछि न त देश, न त राजा। सबै सामसुम। बिहान उठेर पत्रिका पढ्दा पो थाहा पाएँ, राजाले बेलुकै शेरबहादुरजीलाई बर्खास्त गरेछन्। कालान्तरमा यही कदम राजतन्त्र समाप्तिको कारक बन्यो। यसमानेमा पनि मलाई खुसी लाग्छ कि मैले भनेका धेरै कुराहरु सत्य भएर गए, भलै तत्कालिन समयमा मेरा सल्लाह कसैले पत्याएनन्। हात्मकथा भाग एक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यहाँ प्रयोग भएको फोटो अमृत दाहालले खिचेका हुन् Ananta KoiralaA Student of Journalism. Worked as Online Correspondent at News Nepal Network International Pvt. Ltd., Sub-editor in Jagadamba Publication, currently working as Correspondent at pahilopost.com. Interested in Nepali movie. Like to write commentary on social issue, Journalism and literature.More Posts - Website Follow Me:Share this:TweetShare on TumblrPocketMoreEmailPrintLike this:Like Loading...	Related Posts
प्रिय, आऊ तुरुक्क आँ...	0
Aditi November 13, 2016
र हालसम्म सत्य भएका छन हजूरले बोलेका कुराहरू 🤔🤔